Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na m daa igwe kwụ otu ebe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Igwe okirikiri - ihe ngwọta bara uru
Igwe okirikiri - ihe ngwọta bara uru
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na m daa igwe kwụ otu ebe?
Ọ bụrụ na ịchọta onwe gị n'ọnọdụ ndụ egwu, kpọọ 911.
Chọta Ebe Nchekwa.
Igwe kwụ otu ebe-VgbọalaOkuku.
LeleeIgwe kwụ otu ebe gị.
Otu ugboroYou're naEbe nchekwa ụlọ.
Abịa n’ịnyịnya igwe kwụ otu ebe, ịnya ịnyịnya abụọ dị egwu, nke pụtara na mkpọka ahụ nwere ike ime eme, ee tụkwasara anyị obi n’isiokwu a ka anyị gafere ụfọdụ ọdịda ndị a na-ahụkarị n’isiokwu a ma nwee olile anya inye gị ụfọdụ Atụmatụ iji nyere gị aka izere ha. ️ Anyị amaghị na anyị nwere ahụmịhe zuru oke nke na-eburu ụfọdụ isi ihe n'isiokwu a na Hank efunahụla obere akpụkpọ ahụ. Ee edemede a tufuru ọtụtụ akpụkpọ n'ọtụtụ afọ wee jide n'aka na ọ bụ edemede na-enye ya isi mkpịsị aka, nnukwu connoryeah, ka anyị daa, eee, anyị nọ, enwerela m agbanyeghị, ka anyị bido ụzọ a site n'okporo ụzọ awaghị nke ọma. ụzọ ndị na-adịghị mma nwere ike ịbụ isi ihe kpatara ihe mberede, lee anya maka ezughị okè ma chọta ahịrị ị nwere ike ịhọrọ izere okporo ụzọ awara awara na-esote mgbe ị nọ n'otu drivinggbọala otu, ị chọrọ ka ndị ọkwọ ụgbọala ndị ọzọ gbalịa igosi gị ma ọ bụrụ enwere olulu ma obu ihe ichoro n'okporo uzo.
Ọ bụ a oké ụzọ na-ekwurịta okwu na-anọ mma niile ọnụ, mgbe ị na-enweghị ike ịdabere na ndị ọzọ na-agba ịnyịnya na otu ìgwè m na-ekwu, ma eleghị anya, na-ahapụ a obere ohere n'azụ onye na-agba n'ihu onye na-agba ị ga-enweta a obere ihe oge ịzaghachi potholes na nkeji ikpeazụ. Ihe a bu ihe m jidere na pastyeah. Nke a na - adịkarị mgbe ị dabere n’akụkụ akụ, megharịa igwe kwụ otu ebe na ụkwụ gị ga - apịkọ korota ma mee ka ụkwụ gị na - aga n’ime ya. ikuku ma mee ka ị dinara ala na tebụl ma were ezumike na-atụghị anya, ee, ọ dịghị onye chọrọ iwepụ otu n'ime ezumike ndị ahụ na-akwadoghị, mba mgbe ị na-agbadata ala ndị ahụ ma ọ bụ na-adaba na ntụgharị dị nkọ ma ọ bụ na-eme mgbanwe dị egwu? Gbaa mbọ hụ na mgbatị gị dị na elekere isii na mpaghara gị dị na elekere iri na abụọ ka ị ga - anọ ala karịa na enweghị ohere ọ bụla ma ọ bụrụ na ị zọnye ụkwụ na asphalt ma hụ na ị ga - ewere oge zuru ezu site n'akụkụ tupu ị kwụọ ụkwụ na echere m na nke a bụ mmejọ a na-ahụkarị nke ọtụtụ n'ime anyị mere, enwetara m ma ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị n'ọsọ, ị gaghị efunahụ Wheel I tufuru Ka ị ghara ida ụkwụ, na-agbasi mbọ ike ma tupu ị mara ya na ị nwere ike ị na-ewepụ ndị otu gị niile, belụsọ na ị ga-apụ n'okporo ụzọ, echere m na nke ahụ mere m kwa ma ọ bụ n'okporo ụzọ ma ọ bụ egwu mgbe ahụ, ọ ga-abụrịrị na ị ga-abanye na kọntaktị ya na ndi ozo ndi ozo ugbo ala ugbo ala na ihe ndi ozo na-aga hmmmy ụgbọ ala choro nhicha Otu mmeghe nke ufodu ndi ozo na-eme bu na anyi no n'okporo uzo akwọ obere obere okporo ụzọ na-ahapụ anyị obere oge iji meghachi omume na ihe, eg
B. ma ọ bụrụ na ọnụ ụzọ ụgbọ ala na mberede meghee n'ihu gị. anyị ma ọ bụ ikekwe ụgbọ ala na-atụgharị n'okporo ámá onye jamesoh gbaghara m ahụghị gị ka ị na-eje ije ka anyị gbalịa igbochi aka ndị ahụ na ihu na ọnụ ọgụgụ kachasị elu bụ ịlele anya maka ndị blinkers ma ọ bụ Gbalịa ile anya anya na ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ ka ị wee kwe ka onwe gị oge mmeghachi omume nke mere na ị nwere ike ịnyagharị mgbe a kapeeti ụzọ mepee nke ọma, ọ dịghị enyo, ọ dị nwute, ndị na-agba ịnyịnya na-ewere onwe ha na igwe kwụ otu ebe nwere ike ime ka ha ghara ime nke a N'ịga n'okporo ámá maka olulu na ihe ize ndụ ndị ọzọ na izipu snapchat ndị enyi gị bụ ụzọ dị mfe iji gbaga n'ọba oriọna wee merụọ onwe gị ahụ, kedụ ka ị mere? Kwụsị ịnwa idobe ngwaọrụ eletrọniki gị na opekata mpe mgbe a bịara n'ịgba ịnyịnya iji zute ohia ma ọ bụ ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ iji igwe elektrọnik gị, m ga-enyocha ozi gị ma ọ bụ ọbụlagodi ụzọ na ụzọ ị na-apụ ya mere tinye nke a n'akpa uwe gị ka uche gị niile wee dịrị ebe ị na-efe efe ma gbaji ọsọ na-esote ihu n'akụkụ nkuku ị na-atụghị anya na ị ga-ahapụ n'oge ikpeazụ breeki ahụ gafere ss your break point and it na-eme ka ị ghara ịntanetị ka ị wee jidere bench a oke ọdọ mmiri ihe dị ka connor iji mee ka ị ghara ịda mbà ma mechie akụkụ nke ọma ha bụ otu n'ime akụkụ kachasị amasị m nke ịgba ọsọ ọsọ nke adrenaline nọ na otu ọchị na ihu m si n'akụkụ a, mana Ọ dị mma, ọ dịla ọtụtụ oge m kwughachiri nke a na ebubo na-ezighi ezi wee mechie n'ime olulu ebe ịnyịnya ibu m na-enweghị ọchị na ihu m, pụta onye ọlụlụ, anyị ee, anyị na-aga n'ụzọ kwa ị bụ nke oma, inwere ike icho obere oru aka, ee umi che anyi Achọrọ kreenu iji mee ka ị pụọ n'ebe ahụ nnukwu crane ahụ rutere wee nweta m ebe a naanị m ga - ewepụ onwe m ka o wee tufuo ọtụtụ agbụrụ ya enwere ihe ole na ole enwere ike ịka mma iji belata ụfọdụ ihe egwu ọ bụrụ na ọ bịa ka ịkọwahie akụkụ ị na-anya na otu nke a bụ ụzọ dị mma iji jiri anya gị n'ihu gị chọpụta ihe nkuku dị ka mgbe ndị ọkwọ ụgbọala nọ n'ihu gị na-agba ọsọ na brekị ma na ị ga-ehichapụ ntakịrị ọsọ ọsọ, ọ bụrụ na ịnyịnya n'ihu gị na-eweta ọsọ site na gbagọrọ agbagọ mgbe ahụ ọ nwere ike ịbụ gbagọrọ agbagọ ka i wee nwee ike iburu ọsọ ọsọ karịa site na ya mgbe naanị gị nọ, aga m akwọ ụgbọala iji nweta ike gị ịnọ nchekwa, bechapu ọsọ karịa ka ị chọrọ n'ụzọ a, mgbe ị banyere n'aka nke ị na-atụghị anya, ịnwere ike ijikwa ya nke ọma ma dị mfe, nso site Na ịnya ndị ọzọ na-agba ịnyịnya nwere ọtụtụ elele na nke bụ isi bụ ikike ịmịpụ Ọ pụtara na ị nwere ike ịchekwa ike na mbọ ma kesaa ọrụ ahụ na ịnya ịnyịnya buddieshow proces beingnọnyere ndị ọzọ na-agba gị na-eweta ọtụtụ ihe ọghọm gị na onwe gị ma kpọtụrụ onye na-agba gị bụ ihe kacha mkpa Eyeah nwere ikwu, nso ka onye na-agba gị nọ gị nso, ka ị ga - echekwa ike, mana ọ ga - mekwawanye ihe egwu A ọtụtụ ndudue ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eme bụ ime ka ị na-atụgharị wiil ahụ n'ihu gị na mberede onye ọkwọ ụgbọ ala nọ n'ihu na-agbanwe ụzọ mgbe ị kụrụ olulu ma ọ bụ ihe egwu dị n'okporo ụzọ Vo Vo The wheel na-apụ ma ị kụrụ oche ma ọ bụ , nke ka njọ, onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ n'ihu na-emegharị brek ma nye ịdọ aka ná ntị ọkwọ ụgbọala n'azụ.
Ya mere, anyị chọrọ ịnwale izere ịkwanye wiil ahụ n'ihu gị, mana ị nwekwara ike inyekwuo onwe gị ohere ịkwọ ụgbọala n'ihu ka ị nwee oge iji meghachi omume ma ọ bụrụ na mmegharị gị gbanwere, mana n'otu oge ahụ a na-elekwasị anya na ihu onye na-agba ya na-agwa onye ọkwọ ụgbọala nọ n'azụ ya akara ma gosipụta ihe ọ ga-eme ma ọ bụrụ na ọ gbanwee akara ya, ma eleghị anya, na-adọta brek ma ọ bụ ọbụna na-apụ na sadulu ahụ karịa ị nwere ike ịgwa onye a na-agba ụfụ ohere kachasị mma ị ga - ezere ka ị daa n'ọdụ ụgbọ mmiri ebe a matedanke mateoh nke a bụ ihe kachasị mma na anyị chọrọ ịnwale ma zere ịgbanye na mbụ, yabụ ọ bụrụ na ị hụrụ irighiri ihe dị n'okporo ụzọ ma ọ bụ n'akụkụ aka nri ma ọ bụ ọbụlagodi olulu ma ọ bụ iko gbalịa izere ya ma ọ bụrụ na ị nwere ike, mana oge ụfọdụ anyị naanị enweghị ike izere taya dara afọ Ya mere gịnị ka ị na-eme, olee otu ị ga-esi jigide onwe gị ziri ezi mgbe ị malitere ida A? Ọ bụrụ na ịnụrụ na oge ị na-eche ikuku ikuku na-apụta site na taya gị, mgbe ahụ gbalịa idobe otu akara ahụ ma ghara ịgbanwee ya. Mgbe ị na-arụ ọrụ na ihu ihu ihu, ịchọrọ ịgbalị ịgbanwe ahụ gị azụ azụ site na na-eme ibu ibu na n'ihu wheel nke pụtara na ị nwere ike sikrob na ọsọ ahụ na breeki ukwuu odi mfe oge ịgbanwe na taya heyconnor yeah ị ga-kụrụ ụzọ ọzọ City ụgbọala dị ukwuu maka ọtụtụ ihe dị iche iche, ọ dị mma maka ịkwagharị na ọ dị mma imeri okporo ụzọ, mana site na obodo ndị mmadụ na-abịa, ọbịbịa okporo ụzọ na-abịa karịa okporo ụzọ na-abịa karịa okporo ụzọ pụtara na ọtụtụ ndị mmadụ na-echekarị ihe egwu karịa ihe anyị ga-ekwu ma ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọala n'obodo ahụ, ị ​​ga-abanye n'okporo ụzọ na ọkụ ọkụ na ụzọ gburugburu. Gbalia ihu gi aka ekpe na aka nri tupu iga n’ihu, ee, ihe ozo di nma na achoghi ka anya gi na ndi ozo n’abia ma obughi iche na ha ahuru gi ma obu na obodo a no, o were ogologo oge. iji ruo ebe ị na-aga mgbe niile russian na obodo a nwere ike ibute ihe mberede ihe ọma ọzọ iji gbalịa ịhazi ụzọ gị tupu oge eruo, lezie anya n'okporo ụzọ ịnyịnya ígwè ị nwere ike iwere, Nwere ike izere n'okporo ámá ndị na-arụsi ọrụ ike ka ị ghara ịgafe ebe ndị a dị adị maka okporo ụzọ, mana ọchịchị ọlaedo anaghị agba site na obodo, ọ bụghị naanị na ọ ga-aka mma ka ị were oge gị wee kwọrọ n'okporo ụzọ ndị a n'okporo ámá niile dị jụụ hey yeah ya mere na nchịkọta nọrọ na nchekwa na nche ụzọ ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ, mana karịa ihe niile ị na-eme n'ime ikike gị, ee, enwere m olile anya na ndụmọdụ ndị a enyerela aka izere mkpọka n'ụzọ ụfọdụ anyị tụlere n'isiokwu a, ma ọ bụrụ na ị mere ka anyị mara na ngalaba ndị dị n'okpuru ma ọ bụ nye Isiokwu a nnukwu isi mkpịsị aka elu ma ọ bụrụ na ọ nyeere na anyị na-ahụ anyị na isiokwu na-esonụ uh Olile anya m ga-eme ụfọdụ n'ime ndụmọdụ ndị a na-ekele gị Byei na-arụ ọrụ na ya
Ugboro ole ka ndị ọgba ígwè na-ada?
Ugboro ole kaọgba tum tumokuku? Ihe dịka 236ọgba tum tum mkpọkana-ebute mmerụ ahụ kwa ụbọchị na United States, na-enwe ihe dịka 86,000 ngụkọta mmerụ simkpọkakwa afọ (2011-2015).
Longbụ onye na-agba ọgba tum tum na-adị gị mma mgbe niile, mana eziokwu nke ọgba tum tum abụghị ihe ị tụrụ anya ya Ọ bụrụ na igwe kwụ otu ebe gị nwere ihe ọghọm, nrọ gị nwere ike bụrụ nro zuru oke ọnwụ na ihe mberede ụgbọ ala US Cheta na pasent 71 nke ndị ọgba tum tum 2018 nwere okpu agha kwesịrị ekwesị. Yabụ kedu ihe ọzọ ị ga - eme iji lanarị ihe ọghọm ọgba tum tum mgbe ị rụsiri ike na brek ma ọ bụ gbalịa ịkụ bezbọl, ga - enyere gị aka ị gba ọgba tum tum ruo ọtụtụ afọ? Enweela otuto na TV na fim, mkpọtụ nke ọgba tum tum na-eme ka mmadụ chee echiche banyere ụzọ emeghe ogologo na okporo ụzọ na-adịghị agwụ agwụ iji chọpụta, mana ọ dị nwute, ụzọ ndị ahụ nwere ike ịnwụ ndị ọgba tum tum nwụrụ na ụgbọala na ihe karịrị pasent 80 nke ihe mberede ọgba tum tum. na-ebute mmerụ ahụ ma ọ bụ ọnwụ, ndị ahụ abụghị ezigbo nsogbu yabụ kedu ka ị ga - esi zere ịbụ akụkụ nke ọnụ ọgụgụ na - egbu egbu Nzọụkwụ Nke Ikpu Okpu nke Ndị Ọkụ Mgbapu Ndị Emegburu Na Mberede 40 pasent n'ime ha eyighị okpu agha chebe onwe ha, isi ha bụ akụkụ ahụ dị nro ma na-emerụ ahụ ọ nwere ike igbu ma ọ bụ hapụ gị akpọnwụ ka ị kpu okpu dị mkpa n'agbanyeghị agbanyeghị mmasị ị na-eche ikuku na ntutu gị mgbe ị na-agba ọgba tum tum ndị na-agba ịnyịnya na ọbụna daa, ịhụ ndị ọzọ ka ha na-eme obere emehie nwere ike inyere gị aka ịmụ ma ọ bụ b N’emeghị mmejọ ahụ n’onwe gị, chọta ebe ga-adaba adaba iji kpakọọ kama ịmabanye n’ụgbọ ala ọzọ, ebe dị nro ma ọ bụ nke doro anya karị ma dozie igwe kwụ otu ebe gị. Nke a nwere ike inyere gị aka ịlanarị ma belata nhụjuanya gị Nzọụkwụ 4 Roll na Ileghara Mgbe ị dara ala, hapụ ọgba tum tum ahụ ọtụtụ ọgba tum tum na-atụ ọtụtụ narị kilogram na ịchọghị ka ibu ahụ daa n'elu ma kpochapụ gị ọgba tum tum dị arọ. ị banye n'ala kama ịnwa ịgbagharị na 2019, ihe ọghọm na New Hampshire gburu ndị ọgba tum tum asaa mgbe otu ahụ dabara n'ụgbọala ọzọ, mana mgbe igwe kwụ otu ebe ha kụrụ n'ala, ọ na-apụ igwe kwụ otu ebe wee lanarị ma ozugbo ị akpọrepu na igwe kwụ otu ebe, mee ya na ụkwụ gị nke mbụ ka ị na-ezu ohi isi na baseball nke a nwere ike inyere gị aka belata ngwa ngwa Nzọụkwụ 5 na-ariọ ma tie mkpu iji zere ịtụgharị n'okporo ámá, pụọ na okporo ụzọ gaa na mberede ọgba tum tum nwere ike ịhapụ gị ọtụtụ mmerụ ahụ , ị chọghị ka ụgbọ ala kụọ gị, gbalịa ka ị ghara ibili ma jee ije, k Nke a nwere ike ibute mmerụ ndị ọzọ wee gbaghaa ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịme ya site n'okporo ụzọ na-akpọ maka enyemaka, na-atụ anya ihu igwe ga-arụ ọrụ nke ọma ma ị gaghị anọ égbè eluigwe na ọkụ enwe nsogbu ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ nsogbu gị ọzọ, anyị agwala gị ebe a maka otu esi adị ndụ
Kedụ ihe ndị na-akpatakarị ihe mberede igwe?
Offọdụ n'imeọtụtụ-ihe na-akpatakarị ihe mberede igwegụnyere:
Ọdọ adọpụ uche.
Tohapụ ịhapụ ihe zuru ezu.
Akpa ákwà Site Okporo .zọ.
Mgbanwe Lane na-adịghị ize ndụ.
Na-atụgharị n’enweghị anya.
Na-agba ọsọ Red Light ma ọ bụ Kwụsị Ama.
Enweghị Mmeghachi Omume.
Kedụ mmerụ ahụ ndị kachasị agba?
G AREN ARE B THE NJỌ KWES COMR C YBỌCH C AHYNA OTOW A P BERRE igbochi ha?
Ikpere mgbu. Ikpere bunke kachasịsaịtị maka overusemmerụ ahụn'imeịgba ígwè.
Olu / Azụ Mgbu.
Mgbu / Aka Mgbu ma ọ bụ Ọnụ.
Ọnụ ọgụgụ na Tingling.
(egwu eletrọniki) - Ọfọn, lee, anyị nọ na Chamberythe ụtụtụ mgbe ọ gachara Roubaix nke 2018 Tour de France ma anyị nwere obi ụtọ iso Dr Kevin Sprouse, dọkịta otu na Team EF Drapac nọ ọkara awa. Kevin, daalụ maka oge gị.
Nwere ike ịgwa m ihe bụ mmerụ ahụ ise kachasị na-ahụkarị ndị ọkwọ ụgbọ ala. - Echere m na ọnụ ọgụgụ nke mbụ bụ ọkụ ọkụ n'okporo ámá, na nwute na anyị hụrụ na ụnyaahụ na ọ bụ ihe anyị bụ. Ana m arụ ọrụ na ya na-aga n'ihu ugbu a. O siri ike ịhazi ha n'usoro nke ugboro ole ha nwere dịka ụzọ aghụghọ, mana echere m na m ga-agafe ihe ise m hụrụ kacha.
Ya mere, ọkụ n'okporo ámá, mgbaji ọkpụkpụ, nkwonkwo aka, mkparịta ụka dị mwute, na nsogbu ikpere. Ndị a na-ejikarị arụ ọrụ na-adịghị ala ala - yabụ ka anyị bido site n'okporo ámá ma ọ bụrụ na ọ dị mma. Mgbe m bụ onye ọkwọ ụgbọ ala anyị na-egwuri egwu mgbe niile na ọ dị obere ma na-adịchaghị mkpa, m na-ekwu na ọ bụ nke elu ọnụ, mana ọ nwere ike bụrụ nsogbu dị oke njọ, ọkachasị mgbe ọ bụ nnukwu mpaghara ma ọ bụrụ na ọ na-akpata nnukwu ahụ erughị ala, ọ nwere ike ịgbanwe ụdị ịkwọ ụgbọala.
Nwere ike ịgwa m ihe ị chọrọ ka ị hụ maka esemokwu dị iche iche n'okporo ụzọ? - O doro anya, na ịgwọ ọkụ ọkụ n'okporo ámá nke a bụ ụdị nwatakịrị nke ahụ bụ akpa aghụghọ m na-ebu, anyị na-eji teepu ịwa ahụ iji jide ya. Omnifix bụ ihe m nwere, mana anyị na-ejide ụdị ihe dị na ụlọ ahịa ọgwụ mgbe anyị mechara teepu m na-eji, bandeeji Telfa bụ naanị mkpịsị na-abụghị osisi, ihe ị tinyere na nke gị can nwere ike ịnweta ahịa ọgwụ na saịtị. O nwere ike ịbụ na ị hụla ya mbụ, ụdị uwe na-egbu maramara ka ọ ghara ịrapara na ọnya nke anyị na-etinye mmanụ ude atọ na atọ.
Na United States anyị na-akpọ Neosporin a, nke a bụ ụdị ọnyà mana ị na-etinye ya ebe ahụ ma ọ na-aga ọnya ọnya Jiri ihe ị hụrụ na ndị ọkwọ ụgbọ ala, ụgbụ a na-agba ọkụ. Ya mere, nke a bụ ihe nwa m nwanyị asaa hụrụ n'anya ịnya igwe ma ọ bụ ebe mgbe ọ dara ma na-ekwusi ike na m ga-etinye ya na ikpere ya na ikpere ya. Ma eleghị anya ị hụla nke a na ndị na-agba ịnyịnya na peloton ndị na-etinye bandeeji.
Anyị ga-eji ya ọtụtụ na ikpere na ikpere, ebe ndị ahụ na-agagharị na elekere anọ na isii, ma ọ bụghị na ihe a ga-amalite ịgbanwe ma na-awagharị mgbe ọ na-agba ọsụsọ na ị ga-akwụsị ịmịchapu ma kpasuo iwe iwe ma jigide ihe niile. Ihe a niile bụ ihe ị nwere ike ịnweta site na ahịa ọgwụ. Youchọghị akwụkwọ ikike ahụike pụrụ iche ma ọ bụ ihe ọ bụla, ọ dị mfe - ya mere, olu akwa, anyị na-akwa egwuregwu dị ka ndị na-agba ígwè na ị bụghị ezigbo onye na-agba ịnyịnya ruo mgbe ị ga-agbaji eriri olu gị nke na-abụghị eziokwu.
Ma ọ bụ ihe dị ukwuu- (chịrị ọchị) - A ka nwere nke m - Ọ bụ mmerụ ahụ siri ike nke igwe, ọ bụghị ya? ọ? - Ọ bụ.- Nke mbụ, ị nwere ike ịgwa anyị ntakịrị ihe kpatara ya? O nwere ihe jikọrọ ya na nnyefe ike, mgbe mmadụ - Kpamkpam, ọ cycles ts ada.
Ma mgbe aka dị na ogwe osisi ma ha na-agagharị na oke ọsọ, ị na-ahụkarị na ha na-anọkarị n'akụkụ ihe ntụchi Ndị ahụ na-aga, mana ọtụtụ oge enwere otu ụzọ ị ga-esi zere ịda na wiil ahụ, ma mgbe ahụ ha na-agbadata n'akụkụ, na ebumpụta ụwa ebum pụta ụwa, ndị mpiaji, bụ iru na na ike ga-agafere elu, na mgbe mgbe na olu akwa, nke bụ ụdị nke S-ekara ọkpụkpụ, nwere adịghị ike ebe na yinye na ọ na-agbawa - ee, ị gosipụtara m igwe ọrụ ultrasound a dị egwu. Gwa m maka ya, yabụ --- ee, ọ dị mma, na njegharị anyị ‘enwere m nnukwu ihu ọma ịnwe igwe X-ray na njedebe nke ọkwa ọ bụla. Ha anaghị eme nke ahụ n’ọtụtụ agbụrụ.
Giro na-eme ya, mana m chere na ọ bụ naanị agbụrụ abụọ a oge mgbe anyị 'na-echegbu onwe anyị maka mgbaji ọkpụkpụ mgbe ahụ anyị kwesịrị ịchọ ụlọ mberede, ụlọ ọgwụ. Ọ bụ logistically-achọ. Mgbake ọkwọ ụgbọala na ihe niile o nwere nwere ike iwe ogologo oge. Ugbu a anyị nwere uru ọzọ enwere na ịnwe ngwaọrụ ndị a, igwe na-arụ ọrụ nke nwere ike ịlele ọkpụkpụ dị elu dị ka olu akwa, nwere ike ileba anya na nkwojiaka, aka na ịtụba. ụkwụ Gịnị ka anyị chọrọ ịhụ? Mkpụrụ aka. - Scaphoid? - Ọkpụkpụ Scaphoid, ka anyị leba anya na redio dị anya ebe a na-agbada n'ime ọkpụkpụ scaphoid.
Ma otu a ka o si dị, gel a na - eme ka ebili mmiri nke na - apụta site na transducer bufee ya n’ahụ. gbadata site na okpukpu ma obu gbue okpukpu ma nye anyi ihe osise nke cortex ebe ahu. You ga - ahụ na ọ mara mma ma na - aga n’ihu na m nwere ike ụdị agagharị na n’ihu.
Na anyị na-agbada, ọ bụrụ na ị nwere mgbaji ọkpụkpụ mgbe ahụ anyị nwere ike ịhụ na nri ebe akara ahụ na-aga n'ihu na a ga-enwe ibiaghachi, nke pụtara ìhè - ọ dị mma Kevin, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na nkwojiaka ma gwa aka mmerụ ahụ ? - O doro anya, ya mere, anyị ekwuola banyere eriri olu na gịnị bụ ihe kpatara ndị ọkwọ ụgbọala ji ejedebe ụdị gbagọrọ agbagọ ma na-agbadata na aka gbatịrị agbatị na olu olu na-achọ ibute ya, mana olee otu ị chere na ọ bụ nkwojiaka na aka, m na-ekwu, ha kụrụ ala. ou na-etinye ihe mmerụ ahụ ahụ n'ezie, mana ọkpụkpụ nke nkwojiaka na obere ọkpụkpụ dị na ntọala aka, ụdị ebe aka na-ezute nkwojiaka, na-abụkarị ndị ihe metụtara ndị a dara. Ọkpụkpụ bụ ọkpụkpụ ebe a n'akụkụ mkpịsị aka isi, n'akụkụ aka nke nwere mkpịsị aka ahụ, mgbe ahụ ulna gafere ebe a.
Ọkpụkpụ scaphoid bụ obere ọkpụkpụ nke na-anọdụ kpọmkwem na nkụda mmụọ a - ee - ọ na-emerụkarịkwa ahụ. Yabụ mgbe onye na-agba ịnyịnya gbadara, anyị na-elekarị anya n'ọkpụkpụ ndị ahụ, na cartilage na akwara - ee. - Nke ahụ gbara gburugburu na mgbe ahụ ọkpụkpụ n'ebe ahụ na ntọala aka. - Ee. - Mana ụfọdụ n’ime ha siri ike ịgwọ, ma ya mere mmadụ agaghị esoro ha nya ụgbọala.
Ga-apụ na-agba ọsọ. Ma obere ọkpụkpụ scaphoid ahụ, n'ihi ụzọ ọbara si abanye, ọ na-abịa n'ezie, ọkọnọ ọbara na-agbada, ọ na-agabiga n'ọkpụkpụ ma na-abịa azụ azụ n'akụkụ ya, yabụ ọ bụrụ na ị gbajie ọkpụkpụ ị nwere ike, ị ga-egbutu n'ezie ọbara, nke doro anya na-eme ka ọ sie ike, ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume, ịgwọ ọrịa. Ọbụna obere ọkpụkpụ ndị a na-awa ahụ oge ụfọdụ, yabụ na ịchọrọ ijide ha n'oge. - Ya mere, ịgwa m banyere ikpere na-ezighị ezi na igwe kwụ otu ebe, ya mere (ọchị) - Zuru oke! Enweghị ikpere, o doro anya na enwere mmerụ ahụ na ikpere, yabụ ị dapụrụ igwe kwụ otu ebe, kụrụ ikpere gị, nke ahụ bụ nsogbu na-abịa, mana n'eziokwu, ọ bụ? Ahụrụ m ikpere ka ọ na-adakarị oke mmerụ ahụ.
Na nke ahụ pụtara na enwere ike ịnwe nsogbu ahụ ike ma ọ bụ nsogbu ọnọdụ. Ọ na-abụkarị ya. Ọgwụgwọ dabere n’ihe kpatara ya.
Nke ahụ na-apụtakarị ịlaghachi azụ na ilegharị anya na mmegharị ha, na-elele usoro ike ha, na-ele anya na ha dabara adaba. Hà agbanweela olu ha? Hà agbanweela ogologo ịnyịnya ha? Ọtụtụ mgbe, ha nwere ike ha agaghị eme ihe ndị a na nzube, ya mere ha na-eme njem ma na-alaghachi na igwe kwụ otu ebe ha n'ụlọ na oche oche na-amịpụ ntakịrị ma anyị wee tụọ ya ma ọ dị ka, ah, ọ dị sentimita abụọ ma ọ bụ asatọ ma obu ihe obula na - etinye ikpere na ikpere na ihe na - ewute ya .- Kevin, mkpagha, ana m echeta ya nke ọma.
Ahụ adịghị eru ya ala. Kpaa anyị ụka, chọpụta nchoputa, na ihe a ga-eme onye na-agba ịnyịnya - Ya mere mgbagha bụ ihe na-emetụtakarị ndị na-agba ịnyịnya, ọ bụkwa ihe anyị hụrụ n'ime afọ, yana ihe anyị mụtara na afọ ise gara aga. ruo afọ iri dị ka obodo ahụike nke anyị nwere ike iji nke ọma kpọrọkwuo ihe. N'agụmakwụkwọ m, nchoputa nhụjuanya na ọgwụgwọ bụ nnukwu akụkụ nke egwuregwu egwuregwu na ihe anyị lekwasịrị anya nke ukwuu.
Echere m na ị hụrụ na ịgba ịnyịnya ígwè na nke a gosipụtara, na anyị na-etinye usoro iwu ndị a n'ọrụ, anyị na-amalite ịghọta ya ma na ịmatakwu ya nwere ike isi ike n'ihi na ịkọwapụta mkpaghasị bụ nke nwere isi nke pụtara na enweghị nnwale nke ahụ na-agwa anyị na mmadụ nwere mgbagha. Nweghị ike i scanomi ha, ị nweghị ike ịme nyocha ọbara, yana ọ dị ezigbo mkpa ịlele nguzo ha, ọ na-ele ebe nchekwa na ncheta ha, na ọ na-elekwa anya na mgbaàmà ha na-agwa anyị. Yabụ n'echiche, anyị nọ n'ebere ha maka ihe ha gwara anyị. - Ọ na-esiri m ike iche n'echiche, dịka dọkịta, ị nwere ike, ọ ga-esiri m ike ịkwụsị ụdị nyocha ọ bụla, ma ọ bụ opekata mpe nyocha mbụ, n'okpuru nrụgide oge, n'ihi na ọbụlagodi na ọ nwere ike ịdị mma karịa maka ndị na-ekiri anyị Ndidi nwere ike ịda ụda, gịnị ma ọ bụrụ na ị dọpụta mmadụ n'ụbọchị atọ nke Grand Tour ma ha mee ya? enweghị mgbagha? Naanị n'ihi na ịnwere ike ịkụ isi gị, ịnweghị ike ịme nke ahụ, ọ bụghị ihe ziri ezi nye ndị otu ma ọ bụ onye ọkwọ ụgbọ ahụ.- Mba- yabụ ị ga-eji obi abụọ iji gaa n'ihu, ịmalite, chee echiche m- Aga m egwu ya na nchekwa.- Ee. - Ọ bụrụ na enwere m nchegbu --- Ee.- Ọ bụrụ na ihe adịghị mma, eme-- Ee.- Ma ọ bụrụ na m ga-adọta mmadụ na-enweghị mgbagha, n'agbanyeghị na m ekwesịghị inwe, ọ ga-akara m mma ịme mkpebi ahụ.
kwesịrị ekwesị igwe kwụ otu ebe
Ugbu a, ọ ga-eri m. (ọchị) - Ee - Ọ bụrụ na anyị laghachi na họtel na ihe niile dị mma, m ga-agba onwe m ụkwụ, mana ọ ga - akara m mma karịa iweghachi ha azụ ma kpachapụ m anya maka ebumnuche ndị ọzọ. - Ee - Ihe ọzọ dị aghụghọ banyere mgbagha bụ mgbaàmà, nke na-apụtakarị oge. - Ee.- Na ahụmịhe m ọ bụ ihe ọhụụ maka onye ọkwọ ụgbọ ala ịgbada, kụrụ isi ya wee guzoro ebe ahụ n'ụgbọala ma nwee mkparịta ụka ozugbo.-Ee.
Kevin, daalụ nke ukwuu, nke ahụ masịrị ìgwè mmadụ ahụ nke mere na ndị na-ahụkarị ndị ọkachamara na-ahụkarị nwere ike ịbụ ọnya okporo ụzọ, ọkpụkpụ agbaji, nkwonkwo aka, mkparịta ụka na mgbu ikpere na echere m na nke a nwere ike ịbụ otu ihe ahụ maka ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya egwuregwu. nke ọma. Enwere m olileanya na ị hụrụ nke a. Kevin, daalụ ọzọ na ọdịmma maka njem ndị ọzọ.- Daalụ.- Ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu a, nye anyị mkpịsị aka aka, pịa Idenye aha wee pịa ebe a maka inwekwu ihe njegharị.
Nwere ike ịnwụ site na ịda ada?
Igwe kwụ otu ebemmerụ ahụ ọghọm na-apụtakarị karịa ka ndị mmadụ na-eche. Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-aza 2% nke ihe niile metụtara okporo ụzọọnwụna mmerụ ahụ kwa afọ. N'ezie, mmerụ ahụnwere ikena-eme site na mfena-adapụsịiheigwe kwụ otu ebema ọ bụ ịkụ aka n'ụzọ.
Ngwongwo igwe kwụ otu ebe nwere ike ịkwatu?
Nchịkọta Aigwe kwụ otu ebebụkwaruwho ụpho-mkpuma; ndị na-ekwu okwu na-agba umerimn'okpuru mkpakọ. Nnyin imokut ite ke editongo nditing iko etieneodidaibu, ma ọ bụrụ na ndị kwuru erughị ala bụ nso nke buckling erughị ala, nke ikpe nawheel ga-adan'okpuru ọbụna obere ọgba aghara.08.26.2016
Gịnị mere ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji akụda?
Enweghi mmata nke uzo, odighi ikpe ma obu uzo nkeonye na-agba ígwè, enweghị ike nke ndị ọkwọ ụgbọala ịhụndị na-agba ígwèn'ụzọ zuru oke na omume izugbe ma ọ bụ omume ileghara anya,dịụfọdụ isi ihe kpatara yaihe mberede ịgba ígwèeme.
Ọ dị mfe ịdapụ n'okporo ụzọ?
Enweghị usoro, ọ bụla, iji nyere aka mebiedapụ n'okporo ụzọ. Nke a bụ n'ihi na ọ na-eme ọsọ ọsọ ị nweghị oge iji chee. Nabata eziokwu ahụ bụ na ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya, ị ga-agadaaị ga-emekwadaakwa mgbe. Ọtụtụ ọdịda m dara bụgafeeaka na ịkụ isi m.
Ọ dị mma ịnyịnya ígwè n'abalị?
NaCalifornia, a chọrọ ka ị jiri ọkụ naigwe kwụ otu ebe n'abalịn'ihi na ị na-ahụ anya. Jide n'aka na ọkụ ndị a anaghị enwu oke ma ọ bụ na-enwu gbaa n'anya ndị ọkwọ ụgbọala. Nke a nwere ike dọpụ uche ma ọ bụ kpuo ìsì ndị ọkwọ ụgbọala ma bute ihe ọghọm. Ọ dịkwa mma inwe ọkụ na okpu agha ma ọ bụ akwa mkpuchi gị.
Gịnị na-eme mgbe ị kụrụ onye na-agba ịnyịnya ígwè?
Iwu-na-Lane Iwu na Ọrụ
Ọ bụrụị kụrụ onye na-agba ịnyịnyana ụgbọ ala gị, onye ahụ a tara ahụhụ nwere ike ikwu maka ihe ọ bụla site na mmerụ onwe gị na mmebi ihe onwunwe.Ndị na-agba ịnyịnya ígwènwere ike ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ, ma soro iwu okporo ụzọ mgbe niile.Ndị na-agba ịnyịnya ígwènwere ike bxrx okporo uzo niile, ma soro uzo kparita ibe yaigwe.
Kedu mgbe onye na-agba ya na-eweta igwe gbawara agbawa?
Mgbe onye na-agba ya wetara ịnyịnya ígwè dara, Kelly na-ebu ụzọ nyochaa wiil ndị ahụ. Dịka, wiil ndị ahụ na-ebute oke mbibi ahụ, wee bute nsogbu ndị kachasị mfe iji chọpụta.
Kedu ndị bụ ndị ọgba aghara igwe ọgbaghara ahụ?
Ndị òtù Bike Crash bụ ndị na-egwu egwu oge-oge nke aka ha: Meghan na-egwuri egwu na Evil Sword, Perry na See-Through Girls na Candy na Mermaid Parade. Na-eju anya! bụ oge capsule nke oge a Filadelfia.
Gini mere otutu mmadu ji egbu ihe mberede igwe?
Ihe dị ka 20% nke ndị nwụrụ na ọgba aghara igwe nwere ị alcoholụ mmanya na-egbu ọbara nke 0.8 gram kwa deciliter. Usoro metrik a dị elu karịa steeti niile na mba ahụ kwere. Ihe kachasị na-ekwughị banyere ya bụ nleghara anya. Ọtụtụ ndị na-agba ígwè anaghị eso iwu okporo ụzọ.